Ardayda Dugsiyada Dawladda Maxaa Xaflad Sanadeed Loogu Qaban Waayey iyaga “ma Oromaa” | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Ardayda Dugsiyada Dawladda Maxaa Xaflad Sanadeed Loogu Qaban Waayey iyaga “ma Oromaa”
Waa halkii abwaankii Barkhad Case “aan ooyee albaabka ii xidha” habeenka marka aan daawado wararka TV-yada ka hawlgala Somaliland waxaan ka khajilaa madaxda Wasaaradda Waxbarashadda ee ka soo xaadiraya xafladaha xayeysiiska ah ee dugsiyada gaarka loo leeyahay qabsadaan sanadkasta. Waarma shuraakey layihiin oo way ka dhexeysaa tujaartan dugsiyada? Ma dhacdhac baa lasiiyaa madaxda kasoo qeybgasha xafladaha?
Bal akhriste waxaad qiyaastaa dareenka, mooraalka iyo maskaxda ardayga dhigta dugsiga dawladda ee aan weligii dugsigooda xaflad sanadeed taas oo kale loo qaban sidii u arkayo marka uu daawado habeenkasta xafladahaas TV . Ardaygu wuxuu isweydiinayaa tolow adinka maxaa xafladaa, damaashaadkaa iyo farxadaas dugsigiina loogu sameyn waayey. Miyaan dan laydinka laheyn. Miyaanay xaq u lahayn in xaflad loo qabto ka farxisa. Jawaabtu su’aashaas waxay u taalaa dawladii mas’uulka idinka ahayd.
Miyaa loo waayey miisaniyad yar oo sharaabka maalintaas lagaga bixiyo si mooralkooda iyo niyadooda loo dhiso ubadkaa yaryar dawladey. Haddii kharashkaasi idinku adag yahay, waxaan ku talin lahaa in lagu soo rogo dugsiyada gaar ka loo leeyahay cashuurta qabashada xafladaha dugsiyada si loogu daboolo kharashka ubadkaa dugsiyadda dawladda. Haddii aydaan intaas midna sameyn kareyn, bilaa lacaykum cadaalad ardayda uwada sameeyo oo joojiya ka qeybgalka xafladahaas xayeysiiska ah ee lagu niyad jabinayo ubadkaa dugsiyada qaranka.
Cilmi Maxamed Axmed (Eliminov)